Editor Master	 July 7, 2020	 No Comments on ကျောင်းသားများအတွက် အချိန်ပိုင်းအလုပ်ရှာနည်း
Editor Master	 July 6, 2020	 No Comments on 小口資金貸付
住居確保給付金-အိမ်လခမပေးသွင်းနိင်ပါက အထောက်အပံ့ရယူနိင်မည် Program
Editor Master	 July 1, 2020	7Comments on 住居確保給付金-အိမ်လခမပေးသွင်းနိင်ပါက အထောက်အပံ့ရယူနိင်မည် Program
Coronaကြောင့်ဆေးရုံတက်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကုန်မှလဲ? အာမခံက ရောအကြုံး၀င်လား?
Editor Master	 June 29, 2020	 No Comments on Coronaကြောင့်ဆေးရုံတက်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကုန်မှလဲ? အာမခံက ရောအကြုံး၀င်လား?
Editor Master	 September 4, 2020	 No Comments on JLPT စာမေးပွဲဖောင်တင်နည်း
MyJLPT ID အကောင့်လုပ်နည်း
Editor Master	 September 3, 2020	 No Comments on MyJLPT ID အကောင့်လုပ်နည်း
ဂျပန်စာလေ့လာရန် အသုံးဝင်သော Mobile Application(ios/android)
Editor Master	 August 11, 2020	 No Comments on ဂျပန်စာလေ့လာရန် အသုံးဝင်သော Mobile Application(ios/android)
Tokutei Ginou Kaigo စာမေးပွဲ
Editor Master	 July 28, 2020	 No Comments on Tokutei Ginou Kaigo စာမေးပွဲ
Global Asia Group - Myanmar
စားသောက်ဆိုင်၊ စားသောက်ကုန်ထုတ်စာမေးပွဲ လျှောက်လွှာတင်နည်း
Copyright @ 2020 - Global Asia Myanmar